Miraha iyo Khudaarta Shiinaha Qalajinta Xirxirida Warshadda iyo soo -saareyaasha | BOOD
Miraha Iyo Khudaarta Qallajinaysa Xidhmada Dhan
Miraha iyo khudaarta qallajinta iyo xirxirida alaabta ceyriin oo dhan: miraha cusub iyo khudaarta cagaaran, sida yaanyada, basbaaska, basasha, cambaha, cananaaska, guavas, mooska,
Badeecadda ugu dambaysa: budada miraha la qalajiyey, budada khudaarta la qalajiyey, budada yaanyada la qalajiyey, budada shiil ee la qalajiyey, budada toonta la qalajiyey, budada basasha la qalajiyey, cambaha, cananaaska, guavas, mooska
Habka socodsiinta miraha la qalajiyey waxaa lagu magacaabaa qalajinta miraha. Qalajinta macmalka ah waxay u isticmaashaa ilaha kulaylka macmalka ah, hawo iyo gaaska qiiqa oo ah dhexdhexaadinta kulaylka. Xaaladaha la kontoroolo, dhexdhexaadinta gudbinta kulaylka ayaa si joogto ah looga saaraa si loo dhammaystiro habka qalajinta, halka qalajinta dabiiciga ahi aysan u baahnayn in gacanta laga saaro dhexdhexaadinta kulaylka.
Heerka qallajinta miraha waxaa saameeyay afar arrimood: characteristics Astaamaha miraha. Tusaale ahaan, xawaaraha qallajinta ayaa gaabis ah haddii qaab -dhismeedku cidhiidhi yahay ama wax -dhumucdu aad u badan tahay, oo xawaaraha sonkorta sare ka kooban tahay mid gaabis ah. Method Qaabka daaweynta. Tusaale ahaan, cabbirka, qaabka iyo daweynta alkali ee goynta la jaray, goynta habboon iyo daaweynta qoynta alkali waxay kordhin kartaa xawaaraha qalajinta. Ract Astaamaha dhexdhexaadinta qalajinta. Tusaale ahaan, xawaaraha qallajinta ayaa degdeg ah marka heerka socodka uu sarreeyo, heerkulku aad u sarreeyo iyo huurka qaraabadiisu hooseeyo; Characteristics sifooyinka qalabka qallajinta ayaa leh saameyno kala duwan, iyo awoodda raridda ee baabuurka ama suunka xamuulku wuxuu si aan kala sooc lahayn ula siman yahay xawaaraha qallajinta.
Daaweynta qalajinta ka dib
Ka dib marka la qallajiyo, badeecada waa la xushay, waa la darajayn oo waa la baakadeeyay. Miraha qallalan ee u baahan inay xitaa qoyaan (oo sidoo kale loo yaqaan dhididka) waxaa lagu kaydin karaa weelal xiran ama bakhaarro muddo ah, si qoyaanka ku jira xayndaabka miraha iyo qoyaanka u dhexeeya baloogyada miraha (badarka) kala duwan la faafiyo oo dib loo qaybiyey si loo gaaro joogtayn.
Waxaa fiican inaad ku kaydiso miraha la qalajiyey heerkul hoose (0-5 ℃) iyo qoyaan hoose (50-60%). Isla mar ahaantaana, waa in fiiro gaar ah la siiyaa ka ilaalinta iftiinka, oksijiinta iyo cayayaanka.
Hore: Mashiinka Cuntada Qasacadeysan Iyo Qalabka Waxsoosaarka Jam
Xiga: Qalabka Yogurtka Yar
Qalabka Casiirka Bayberry
Qalabka Casiirka Canabka
Qalabka Casiirka Qaraha
Jelly Jilicsan oo Dhammeystiran / Nacnac jilicsan Confectio ...
Chips baradhada Mini Machine Samaynta
Hommy Qaboojiyay Yogurt Ice Cream Machine Yogurt Cu ...
Chips Muuska Automat Intertropical jarjar Ma ...
Warshadaha 500L/h Jilicda Wax -soo -saarka Jalaatada jilicsan ...
Chips Baradho Baradho Warshadeysan oo ah Hawlaha Cuntada